Umhla My Pet » Indlela Ukuthandana Intombazana Ecela Unomsa Little
ngokuthi kwiveranda Hillard
ukubuyekezwa: Sep. 26 2020 | 2 min ukufunda
Ukuba ndithandana intombazana ebonisa uthando encinane nani nilingeke ukuba siyifake ngetawuli. Ukuze abe omnye usoloko ukuqalisa zoqhagamshelwano ezifana ukwanga, cuddling, okanye ange. Nangona yena yamkele iziboniso lwakho uthando, kubonakala ukuba hambi ukuqalisa ezi izijekulo eyedwa. Ukuba iqikelele le, ukususela kumhla wakho kwaye onikhathazayo, bathabathe inyathelo ngoku ukwenzela ukuphepha uxinezeleko okungeyomfuneko kulwalamano lwakho.
Kubalulekile ukuqonda ukuba isithandwa sakho awukwazi ukufunda ingqondo yakho kwaye bengazi indlela yokuziphatha elibachaphazela ngayo. Relationship ingcali, Dr. Karen Sherman ugxininisa ukuba kubalulekile ukuxelela intombi yakho ukuba indlela ovakalelwa ngayo. mhlawumbi, ukuziphatha kwakhe unaffectionate ushiye uzive ukucekisile, akalikhathalelanga, kuyamkhathaza, okanye ayinqweneleki. Nakuphi na, yitsale bucala ingxoxo enzulu siliphulaphule indlela izenzo zakhe kukuchaphazela.
Emva kokuba ndizise ukuqonda oko ikukhathaze, lixesha uphanda. Buza imibuzo ukunceda ekuboneni nobangela yokuziphatha nentombi yakho. Kusenokwenzeka ukuba nolwalamano lwangaphambili ekwathi kulo kwavavanywa imihla yakhe zange ukuba lukhulu uthando. koko, ukuba ulwalamano lwakho zisenako olutsha, yena kusenokufuneka ixesha elingakumbi akakhululeki kuwe kunye neemfuno ubudlelwane. Xa ababini sele echaza izizathu kunokwenzeka ngenxa yokungabi uthando, iindlela baphose nobabini unokuba iimfuno zakho wadibana.
khumbula, umele awukhuphe neemvakalelo ntombi ngendlela luyazizela, nokuba ithe okufanayo kubo. Kwinqaku yakhe "10 Iimpawu Abantu abathanda eliphezulu", Dr. Kory Floyd udwelisa iingenelo ezininzi ebonisa uthando ezifana nokubane self-esteem ephakamileyo, ukoyika ngaphantsi zokwabelana, nokomelela olukhulu uxinezeleko. Ukongezelela, Abaphandi Andrew Gulledge, Michelle Gulledge, noRobert Stahmann wabonisa ukuba uthando emzimbeni kwandisa ulwaneliseko budlelwane omabini amaqabane. Nangona yokungabi ntombi uthandana nayo uthando, ngokuphandle eyakho ukubonisa umsa ikuvumela ukuba nkulu kwezi neziphumo ezakhayo kwaye kuphuculwe nobudlelwane kwixesha elizayo.
Yenza Isigqibo Esinzima
Mhlawumbi kuza kwindawo xa uqonda ukuba, nangona eyona migudu ntombi uthandana nayo, awukoneliseki kubudlelwane. Dr. Sherman uthi kubalulekile nayiphi budlelwane ukufunda ukwamkela omnye umahluko somnye. Ukuba ufumanisa ukuba ukunqongophala ntombi uthandana nayo uthando uyaqhubeka enikhathazayo, kusenokuba bhetele ukuluphelisa ulwalamano siyakumema kwaye ufumane umntu lingaphumeza ukufuna kwakho umsa.